Askari boolis ah oo horay nin oday ah ugu dilay Muqdisho oo maanta dil toogasho ah lagu xukumay | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Askari boolis ah oo horay nin oday ah ugu dilay Muqdisho oo...
Askari boolis ah oo horay nin oday ah ugu dilay Muqdisho oo maanta dil toogasho ah lagu xukumay
Muqdisho (Halqaran.com) – Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida ayaa xukun dil toogasho ah ku diray Askari ka tirsan Ciidanka Booliska Soomaaliya oo Isgoyska Ceelgaabta ee Muqdisho si bareer ugu dilay Nin Odey waayeel ahaa oo halkaas ku lahaa goob yar oo Ganacsi.
Nuur Daahir Geedi oo ah Askariga dilay Marxuumka oo lagu magacaabi jiray Cumar Xasan Macalin ayaa qirtay inuu ka dambeeyay falkaas, isagoo u dilay muran ka dhashay laba kun oo shilin Soomaali ah oo Odeyga kaga iibsan lahaa sigaar.
Guddoomiyaha Maxkamadda Ciidamada Gaashaanle sare Xasan Cali Nuurte ayaa ku dhawaaqay xukunka Dilka toogashada ah ee lagu diray Eedeysane Nuur Daahir, taasi oo noqoneysa qisaasta Marxuumka.
Sidoo kale, Guddoomiye Shuute ayaa sheegay in xukunka dilka toogashada ee lagu riday Eedeysane Nuur Daahir uu racfaan uga furan yahay cidii aan xukunka dilka ku qanacsaneyn.
Xeer Ilaaliyada guud ee Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida Gen Cabdullaahi Buule Kameey ayaa Maxkamadda ka dalbaday in xukun dil toogasho ah lagu fuliyo Eedeysane Nuur Daahir,
Waxay aheyd 16-kii June bishii hore, markii Nuur Daahir uu Isgoyska Ceelgaabta ee Degmada Xamar-Jajab uu ku dilay Nin Odey ahaa, isagoo u dilay xabad si gaar ah oo ka iibsanayay, waxaana inta uusan Askariga goobta ka baxsan, falka kadib gacanta ku dhigay Ciidanka Booliska.
Askari dil toogasho lagu xukumay